၁၉၈၇ နျူးကလီးယားစာချုပ်မှ ရုရှားနုတ်ထွက်ကြောင်း သမ္မတပူတင် ကြေညာ - Yangon Media Group
မော်စကို၊ မတ် ၅ – ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်က ရုရှားနိုင်ငံသည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကချုပ်ဆို ခဲ့သော နျူကလီးယားလက်နက်ထိန်း ချုပ်ရေးစာချုပ်မှ နုတ်ထွက်ကြောင်း၊ အဆိုပါစာချုပ်ကို အမေရိကန်က ချိုး ဖောက်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားလိုက်သည်။
အမေရိကန်သည် နျူကလီးယား စာချုပ်မှနုတ်ထွက်ကြောင်း ယခင်လက ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်ပြန်လိုက် သည့် အမိန့်ဒီကရီတွင် ပူတင်က တာလတ်ပစ်နျူကလီးယား လက်နက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်ပါအချက်အလက်များကို ရုရှားကလိုက် နာတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်က စာချုပ်ပါအချက် အလက်များကို မလိုက်နာမချင်း (သို့မဟုတ်)¤င်း၏ စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှုကို မရုပ်သိမ်း သည်အထိ စာချုပ်မှ နုတ်ထွက်နေမည်ဖြစ် ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ရုရှား၏စစ်ဦးစီးအရာရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဗယ်လာရီဂရာဆီမော့နှင့် အမေရိကန်စစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျိုးဇက်ဒမ်ဖို့ဒ်ကို ဗီယင်နာမြို့၌ မဟာဗျူဟာတည် ငြိမ်ရေးဆွေးနွေးပွဲပြီးနောက် ပူတင်က ဤအမိန့်ဒီဂရီကိုထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်က ရုရှားအား INF စာချုပ်ချိုးဖောက်မှုကို ခြောက်လအတွင်း ရပ်တန့်ပါက စာချုပ်မှ မထွက်ဘဲ ရုရှားကမလိုက်နာပါက စာချုပ်မှနုတ်ထွက်မည်ဟု သတိ ပေးခဲ့သည်။ ရုရှားက စာချုပ် မဖောက်ဖျက်ဟု ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်က ရုရှားသည် ခရုစ်ဒုံးကျည်များ ထုတ်လုပ်ကာ တာဝေးပစ်ဒုံးပျံများကို ထုတ်လုပ် နေသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ စာချုပ်အရ ကီလိုမီတာ ၅ဝဝ မှ ၅၅ဝဝ အထိပစ်နိုင်သည့် ဒုံးပျံများကို နေရာချထားခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းများ မလုပ်ရဟုပါရှိသည်။
ထရန့်အစိုးရက တရုတ်မှ တာလတ်ပစ်ဒုံးပျံများချထားမှု မပါဝင်၍ စာချုပ်ကိုပြန်ပြင်ရမည် ဟုပြောခဲ့သည်။ ဤကိစ္စကို တရုတ်က ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ ရုရှားက အမေရိကန်သည် ဥရောပအရှေ့ပိုင်း၌ ဒုံးခွင်းဒုံးမဟုတ်ဘဲ ခရုစ်ဒုံးပျံများကို ချထားနေသည်ဟု စွပ်စွဲလိုက်သည်။
INF စာချုပ်ပျက်သွားပါက ဥရောပတွင် ဒုံးပျံလက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးပြိုင်ဆိုင်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိနေကြသည်။ ယခင်ကပူတင်သည် ရုရှားတာလတ်ပစ်ဒုံးပျံများကို ဥရောပ အခြမ်း မဟုတ်သည့်နေရာများ တွင်ဖြန့်ချထားခဲ့သည်။ အမေရိ ကန်မှ ခြိမ်းခြောက်လာပါက တုံ့ ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအ တွင်းရေးမှူးချုပ် ဂူတာရက်စ်က INF စာချုပ်ကို ရုရှားနှင့် အမေရိ ကန်တို့က ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြ ရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ထိုင်းတွင် မြန်မာလူမျိုး ဦးစီးသော မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေး ဂိုဏ်းကို ဖမ်းဆီး၊ ဘတ??
ပုဒ်မ ၅၉(စ)လုံး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူ ၁ဝဝ ခန့်က မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင?
ဧရာဝတီမြစ်ရေ တိုက်စားမှုကြောင့် ရေစကြိုမြို့နယ် ဗလဘကျေးရွာရှိ မြစ်ကမ်းနား နေအိမ် ၁၅ လုံးခန??
ရာသီအကုန်တွင် ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်နေရာ မျှော်မှန်းထားကြောင်း ဂျာဂင်ကလော့ ဖွင့်ဟ
ရန်ကုန်မြို့တော် ယာဉ်ကြောပိတ်မှုကြောင့် နေ့စဉ် ကျပ်ဘီလီယံနှင့်ချီ ဆုံးရှုံးနေ
တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပွဲတော်ကို ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်အဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ?
အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို မျှနိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်မှုမျိုး ယခုအစိုးရတွင် မရှိဟု ဒီချု??